ပြည်သူ ချစ်မင်းသမီးချော ဆရာဝန်မလေး ပိုင်ဖြိုးသု ရဲ့ ဘဝဇာတ်ကြောင်း …. – GaMone Media
Homepage / Celebrity / ပြည်သူ ချစ်မင်းသမီးချော ဆရာဝန်မလေး ပိုင်ဖြိုးသု ရဲ့ ဘဝဇာတ်ကြောင်း ….
ပြည်သူ ချစ်မင်းသမီးချော ဆရာဝန်မလေး ပိုင်ဖြိုးသု ရဲ့ ဘဝဇာတ်ကြောင်း ….
သရုပ်ဆောင်ပိုဖြိုးသု ကတော့မြန်မာ့ အနုပညာလောကမှာ အပြုံးချိုချိုလေးနဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီး ပရိတ်သတ်များ ရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုအခိုင် အမာရရှိထားသောမင်းသမီးချောပဲဖြစ်ပါတယ်၊ပိုင်ဖြိုးသုကို၁၉၉၀ခုနှစ်၊ဧပြီလ၅ရက်နေ့၊ရန်ကုန်မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပ ါတယ်၊သူ မကဆေးတက္ကသို လ်၁ရန်ကုန်မြို့မှာဘွဲ့ရရှိထားတဲ့ ဆရာဝန်တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ပိုင်ဖြိုးသုရဲ့မိသားစုရေးကတော့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်နေ့မှာ ဒါရိုက်တာဏကြီးနဲ့လက် ထက်ထိမ် းမြားခဲ့ပါ တယ်၊ဒါရိုက် တာဏကြီးက တော့ သူမထက်အသက်၉နှစ်ကျော်လောက်ကြီးပြီး သူမကိုအလိုလိုက်ကာချစ်ခင်ပေးပါသေးတယ်၊ပိုင်ဖြိုးသုက ၀၁၇ခုနှစ်မှာရိုက်ကူးတဲ့မီဇာတ်ကားနဲ့ခေါင်ဆောင်မင်းသမင်း အဖြစ်ရိုက်ကူးခွင့်ရခဲ့ပါတယ် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးများစွာကိုလဲ ရိုက်ကူး ထားပါသေးတယ်။
ဒါတွေကတော့၂၀၁၆ခုနှစ်မှာဧဒင်ရဲ့ နတ်သမီး၊၂၀၁၇ခုနှစ်မှာသရဲမ၊ ဘီလူးမနဲ့မိန်းမပျို၊နေဝင်အိပ်တန်းတက်၊၂၀၁၈ခုနှစ်မှာဂန္တဝင်အငြို း၊မီ၊၂၀၁၉ခုနှစ်မှာထာဝရနှောင်ကြိုး၊၂၀၂၀ခုနှစ်မှာမိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ဖွင့်ဟဝန်ခံချက်စတဲ့ရုပ်ရှင်ဇ ာတ်ကား ကြီးကိုရိုက် ကူးထားပါတ ယ် ။ သရဲမ၊ဘီလူးမနဲ့မိန်းမပျိုရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားကြီးမှာတော့ ရွှေရုပ်သံအမည်ရတဲ့ဇာတ်ကောင်နဲ့အမျိုးသ မီးဇာတ်ပို့ဆုကိုရရှိခဲ့ပ ါတယ်၊ ပြည်သူချစ်မင်းသမီးချောလေး ပိုင်ဖြိုးသုရဲ့ဘဝအကြောင်းကို စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက်ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
သ႐ုပ္ေဆာင္ပိုၿဖိဳးသု ကေတာ့ျမန္မာ့ အႏုပညာေလာကမွာ အၿပဳံးခ်ိဳခ်ိဳေလးနဲ႔ ဆြဲေဆာင္မႈရွိၿပီး ပရိတ္သတ္မ်ား ရဲ႕ ခ်စ္ခင္အားေပးမႈကိုအခိုင္ အမာရရွိထားေသာမင္းသမီးေခ်ာပဲျဖစ္ပါတယ္၊ပိုင္ၿဖိဳးသုကို၁၉၉၀ခုႏွစ္၊ဧၿပီလ၅ရက္ေန႔၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာေမြးဖြားခဲ့ပ ါတယ္၊သူ မကေဆးတကၠသို လ္၁ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာဘြဲ႕ရရွိထားတဲ့ ဆရာဝန္တစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။
ပိုင္ၿဖိဳးသုရဲ႕မိသားစုေရးကေတာ့ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္ေန႔မွာ ဒါ႐ိုက္တာဏႀကီးနဲ႔လက္ ထက္ထိမ္ းျမားခဲ့ပါ တယ္၊ဒါ႐ိုက္ တာဏႀကီးက ေတာ့ သူမထက္အသက္၉ႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္ႀကီးၿပီး သူမကိုအလိုလိုက္ကာခ်စ္ခင္ေပးပါေသးတယ္၊ပိုင္ၿဖိဳးသုက ၀၁၇ခုႏွစ္မွာ႐ိုက္ကူးတဲ့မီဇာတ္ကားနဲ႔ေခါင္ေဆာင္မင္းသမင္း အျဖစ္႐ိုက္ကူးခြင့္ရခဲ့ပါတယ္ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကီးမ်ားစြာကိုလဲ ႐ိုက္ကူး ထားပါေသးတယ္။
ဒါေတြကေတာ့၂၀၁၆ခုႏွစ္မွာဧဒင္ရဲ႕ နတ္သမီး၊၂၀၁၇ခုႏွစ္မွာသရဲမ၊ ဘီလူးမနဲ႔မိန္းမပ်ိဳ၊ေနဝင္အိပ္တန္းတက္၊၂၀၁၈ခုႏွစ္မွာဂႏၲဝင္အၿငိဳ း၊မီ၊၂၀၁၉ခုႏွစ္မွာထာဝရေႏွာင္ႀကိဳး၊၂၀၂၀ခုႏွစ္မွာမိန္းမတစ္ေယာက္ရဲ႕ဖြင့္ဟဝန္ခံခ်က္စတဲ့႐ုပ္ရွင္ဇ ာတ္ကား ႀကီးကို႐ိုက္ ကူးထားပါတ ယ္ ။ သရဲမ၊ဘီလူးမနဲ႔မိန္းမပ်ိဳ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားႀကီးမွာေတာ့ ေ႐ႊ႐ုပ္သံအမည္ရတဲ့ဇာတ္ေကာင္နဲ႔အမ်ိဳးသ မီးဇာတ္ပို႔ဆုကိုရရွိခဲ့ပ ါတယ္၊ ျပည္သူခ်စ္မင္းသမီးေခ်ာေလး ပိုင္ၿဖိဳးသုရဲ႕ဘဝအေၾကာင္းကို စာဖတ္ပရိတ္သတ္ႀကီးအတြက္ျပန္လည္တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။
Previous post ကြွေချင်စရာ ကောင်းလွန်းနေ တဲ့ ပုံစံလေး နဲ့ ရင်ဖိုစရာ ကောင်းလွန်းနေတဲ့ ရှင်ယွန်းမြတ်
Next post တော်ဝင်ဆန် တဲ့ အလှတရား တွေကို ပြသ လိုက် တဲ့ အိချောပို ဗီဒီယိုလေး